‘AQOONSI BEEN AH’ – Kooxda Stuttgart Oo Shaacisay İn mid Kamid Ah Xiddigaheeda Uu Magac Been Abuur Ah Ku Cayaarayay Iyo Sababta Ku Kaliftay – Garsoore Sports
‘AQOONSI BEEN AH’…
‘AQOONSI BEEN AH’ – Kooxda Stuttgart Oo Shaacisay İn mid Kamid Ah Xiddigaheeda Uu Magac Been Abuur Ah Ku Cayaarayay Iyo Sababta Ku Kaliftay
Cayaaryahanka kooxda Stuttgart ee Silas Wamangituka ayaa shaaca ka qaaday in magiciisa dhabta ah uu yahay Silas Katompa Mvumpa, isagoo sheegay inuu ku cayaarayay aqoonsi been abuur ah oo uu siiyay wakiilkiisii hore.
Silas, oo ka cayaari kara garab ama afka hore ee weerarka, ayaa 11 gool oo Bundesliga ah u dhaliyay kooxdiisa Stuttgart xilli-cayaareedkii dhowaan idlaaday ee 2020-21, isagoo caawiye ka noqday afar gool oo kale kahor inta uusan xilli-cayaareedkiisu ku dhammaan dhaawac jilibka kaso gaaray.
Waxay ahayd ololihiisii labaad ee uu kooxda la galo, kaddib markii uu Silas kaga soo biiray Paris FC kahor xilli-ciyaareedkii 2019-20.
Maanta oo Talaado ah ayay kooxda Stuttgart shaacisay in xiddigooda u dhashay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo uu ku cayaarayay magac aan isagu lahayn.
Stuttgart ayaa sheegtay in Silas uu iyagu ku wargaliyay in wakiilkiisii hore uu ku riixay inuu beddelo magaciisa oo loo sameeyo dukumiinti been abuur ah, taasoo sidoo kale ka dhigtay in cayaaryahankan uu sannad ka yar da’diisa uu ku qorto aqoonsigiisa beenta ah, maadaama taariikhda dhalashadiisa laga beddelay Oktoobar 6, 1998 oo loo beddelay Oktoobar 6, 1999.
“Sanadihii la soo dhaafay, waxaan si joogto ah ugu noolaa cabsi waxaana sidoo kale aad uga walwalayay qoyskeyga ku nool Congo,” ayuu Silas ku yiri bayaanka naadiga.
“Waxay ahayd talaabo adag oo aan qaaday si aan sheekadayda ugusoo bandhigo dadweynaha, waligayna geesinimo ma sameeyeen haddii Stuttgart, kooxdeyda iyo VfB aysan ii noqon lahayn sida guri labaad iyo meel aamin ah.”
Bayaanka Stuttgart ayaa sharraxay sida Silas uu sannadkii 2017 tijaabo ula qaatay naadiga reer Belgium ee Anderlecht.
Silas wuxuu helay fiiso uu ugu safro dalka Belgium, isaga oo wata magaciisa saxda ah. Anderlecht, oo xiiseyneysa saxiixiisa, ayaa Silas fartay inuu ku laabto Congo isla markaana uu ku soo laabto fiiso cusub si uu u saxiixo qandaraaskiisa kooxda.
Stuttgart ayaa bayaanka ay soo saartay ku tiri “Markii ay xaaladdani soo shaac baxday, wakiil ayaa la sheegay inuu Silas culays weyn saaray si aanu ugu dhaqaaqin Belgium isla markaana ka dhaadhiciyey inaan loo ogolaan doonin inuu kusoo laabto Yurub haddii uu ka tago Belgium oo uu ku laabto dalkiisa Congo.”
“Silas wuxuu aaminay wakiilka wuxuuna la degay Paris. “
Silas ma uusan u saxiixin Anderlecht, wuxuuna xirfadiisa ka bilaabay Yurub isagoo u saftay kooxda faransiiska ee Ales.
Agaasimaha isboortiga Stuttgart Thomas Hitzlsperger ayaa yiri: “Marka ugu horreysa, Silas wuxuu dhibbane u yahay beddelista magaciisa.”
“Waxaan ixtiraam weyn u hayaa xaqiiqda ah inuu isagoo da’yar ah uu qaaday tallaabadan geesinimada leh si uu u caddeeyo xaaladdiisa. Waan sii wadi doonnaa inaan siino dhammaan caawimaadda uu u baahan yahay gabi ahaanba ixtiraam kasta.”